Ampidino Viber ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (81.25 MB)
Ny fampiharana fandefasan-kafatra finday malaza Viber dia azo alaina ao aminny Windows izao. Noho ny rindrambaiko Viber Windows dia afaka mandefa hafatra sy miantso telefaona aminireo mpampiasa Viber ao aminny lisitra maimaimpoana ianao.
Ny rindrambaiko Viber Windows dia mametaka ho azy ireo fifandraisana, hafatra ary tantara momba ny antso ao aminny fampiharana Viber aminny findainao. Azonao atao ny mamily fiara avy aminny alàlanny fampiononanny PC anao hanombohana resaka aminny Viber.
Fiantsoana feo HD kalitao tsara indrindra
Mandefa hafatra an-tsoratra sy sary
resaka anaty vondrona
Tsy mila fisoratana anarana raha toa ka manana Viber napetraka aminny findainao
Ampifanaraho eo aminao ny fifandraisana sy ny hafatrao eo anelanelanny telefaona finday sy Windows anao
Famindrana antso an-tariby eo anelanelanny fitaovana
Haben'ny rakitra: 81.25 MB
Fanavaozana farany: 05-07-2021